FPC ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆားကစ်ဘုတ်နှင့်သက်ဆိုင်သောစည်းမျဉ်းများ - PCB ရှေ့ပြေးပုံစံ၊ ထုတ်လုပ်၊ စက်ရုံ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ထုတ်လုပ်သူ
တောင့်တင်းသော Flex PCB
» Blog » FPC ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆားကစ်ဘုတ်နှင့်သက်ဆိုင်သောစည်းမျဉ်းများ
FPC ကိုမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ၊ လက်ပ်တော့များ၊ PDA၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများ၊ LCMS စသည့်ထုတ်ကုန်များစွာတွင်အဓိကအားဖြင့်ဤနေရာတွင် FPC ၏အသုံးများသောအသုံးအနှုန်းအချို့ရှိသည်။
၁။ အပေါက်မှတဆင့် (အပေါက်၊ အောက်ခြေပေါက်)
၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသောဘုတ်အဖွဲ့၏ဆားကစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သုံးသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် coverlay (ပထမဖောက်ထုတ်ရမည့်အပေါက်မှတဆင့်) ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်ဂဟေဆော်ရန်လိုအပ်သောအပေါက်လက်စွပ်အပေါက် (သို့) လေးထောင့်ဂဟေဆော်ပြားကိုဂဟေဆော်ရာတွင်လွယ်ကူစေရန်တမင်တကာထိတွေ့ရမည်။ “ access hole” ဟုခေါ်သောမူလကအပေါ်ယံအလွှာသည်အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်၊ ထို့ကြောင့်ပြင်ပကမ္ဘာသည်မျက်နှာပြင်အကာအကွယ်အောက်ရှိပန်းကန်ဂဟေဆက်ကိုချဉ်းကပ်နိုင်သည်။ အချို့အလွှာပေါင်းစုံပျဉ်ပြားများတွင်ဤသို့သောအပေါက်များလည်းရှိသည်။
၎င်းကို polyacrylic acid resin ဟုလူသိများသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြားအများစုသည်၎င်း၏ရုပ်ရှင်ကိုနောက်ဖလင်အဖြစ်သုံးသည်။
အစေး (သို့) အပေါ်ယံကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုသည်ပေါင်းစပ်မှုနှစ်ခုကိုပြီးမြောက်စေနိုင်သော interface တစ်ခုဖြစ်သည်။
အလယ်ပန်းကန်ပြား (သို့) panel တစ်ခုတွင်၊ အပေါက်လက်စွပ်ဂဟေဆော်ပြားသည်ပန်းကန်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပိုခိုင်ခံ့မှုရှိစေရန်၊ အပေါက်ကိုပိုစုစည်းစေရန်၊ လက်စွပ်အပြင်ဘက်ပိုလျှံသောနေရာကိုလက်ချောင်းများနှင့်တွဲနိုင်သည်။ ပန်းကန်မျက်နှာပြင်မှရေပေါ်ဖြစ်နိုင်ခြေ
dynamic flex board ၏ထူးခြားချက်များထဲမှတစ်ခုအနေနှင့်ဥပမာအားဖြင့် computer disk drive များ၏ print head များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်၏အရည်အသွေးသည်အကြိမ်တစ်ဘီလီယံ၏ “bending test” သို့ရောက်လိမ့်မည်။
6. Bonding အလွှာသည် bonding layer ဖြစ်သည်
၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ကြေးနီပြားနှင့် polyimide (PI) အလွှာများအကြားကော်ပြားအလွှာ (သို့) TAB တိပ် (သို့) ပြောင်းလွယ်ပြားပြား၏အပြားကိုရည်ညွှန်းသည်။
7. Coverlay / အဖုံးအင်္ကျီ
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်၏အပြင်ပတ်လမ်းအတွက် hard board အတွက်သုံးသောအစိမ်းရောင်ဆေးသုတ်ခြင်းသည်ဂဟေဆော်ခြင်းကိုသုံးရန်လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းသည်ကွေးနေစဉ်ပြုတ်ကျနိုင်သည်။ ဘုတ်ပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပျော့ပျောင်းသော“ acrylic” အလွှာကိုသုံးရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းကို anti welding film အဖြစ်သာမကအပြင်ပတ်လမ်းကိုကာကွယ်ပေးပြီး soft board ၏ခံနိုင်ရည်နှင့်ကြာရှည်ခံမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ဤအထူး“ အပြင်ဘက်ရုပ်ရှင်” ကိုအထူးကာကွယ်မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်အလွှာဟုခေါ်သည်။
8. Dynamic flex (FPC) ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်
၎င်းသည် disk drive ၏ read-write head ရှိပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်ကဲ့သို့စဉ်ဆက်မပြတ်ရွေ့လျားမှုအတွက်သုံးရန်လိုအပ်သောပြောင်းလွယ်သော circuit board ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်စနစ်တကျစုဝေးပြီးနောက်အလုပ်မလုပ်တော့သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်ကိုရည်ညွှန်းသော“ တည်ငြိမ် FPC” တစ်ခုရှိသည်။
၎င်းသည်အားဖြည့်ဖိုက်ဘာအ ၀ တ်၏ဖလင်၊ သို့မဟုတ် FPC ၏ bonding အလွှာကဲ့သို့အားဖြည့်ပစ္စည်းမပါသောကော်အပါးလွှာပါ ၀ င်နိုင်သည့်ခြောက်သွေ့သောအဖုံးလွှာအလွှာကိုရည်ညွှန်းသည်။
10. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပုံနှိပ်တိုက်နယ်၊ FPC ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်
၎င်းသည်အောက်ပိုင်းတပ်ဆင်နေစဉ်သုံးဖက်မြင်အာကာသပုံသဏ္ာန်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သောအထူးဆားကစ်ဘုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အလွှာသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် polyimide (PI) သို့မဟုတ် polyester (PE) ဖြစ်သည်။ အမာခံဘုတ်ကဲ့သို့ပျော့ပျောင်းသောဘုတ်အဖွဲ့သည်အပေါက်ထဲသို့ထည့်ခြင်း (သို့) မျက်နှာပြင်ကော်ပြားများတပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ချနိုင်သည်။ ဘုတ်ပြားမျက်နှာပြင်ကိုအကာအကွယ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဂဟေဆော်ခြင်းအတွက်ပျော့ပျောင်းသောအဖုံးအလွှာနှင့် တွဲ၍ ဖြစ်စေ၊ ပျော့ပျောင်းသောဂဟေအစိမ်းရောင်သုတ်ဆေးဖြင့်ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပျက်ယွင်းမှုဟုခေါ်သည့်ကြိမ်ဖန်များစွာကွေးခြင်းနှင့်ကွေးခြင်းကြောင့်ပစ္စည်း (ပန်းကန်ပြား) သည်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးသည်။
12. Kapton polyamide ပျော့သောပစ္စည်း
၎င်းသည် DuPont ထုတ်ကုန်များ၏ကုန်သွယ်မှုအမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသော insulating polyimide စာရွက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ကြေးနီသတ္တုပြား (သို့) ကြေးနီသတ္တုပြားကိုကပ်ပြီးနောက်၎င်းကိုပြောင်းလွယ်ပြား (FPC) ၏အခြေခံပစ္စည်းအဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
13. Membrane ခလုတ်
သယ်ဆောင်သူအဖြစ်ပွင့်လင်းသော Mylar film ဖြင့်ငွေငါးပိ (ငွေငါးပိသို့မဟုတ်ငွေငါးပိ) ကိုမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်နည်းဖြင့်အထူဖလင်ပြားပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ပြီး၎င်းကိုဆို့ထားသော gasket နှင့်ပြူးပြူးပြားသို့မဟုတ် PCB သို့ “touch” switch သို့မဟုတ် keyboard ဖြစ်လာစေရန်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤသေးငယ်သော“ သော့” ကိရိယာကိုလက်ကိုင်ဂဏန်းတွက်စက်များ၊ အီလက်ထရောနစ်အဘိဓာန်များနှင့်အိမ်သုံးအသုံးအဆောင်အချို့၏အဝေးထိန်းစနစ်များတွင်သုံးလေ့ရှိသည်။ ၎င်းကို“ membrane switch” ဟုခေါ်သည်။
14. Polyester ဇာတ်ကားများ
DuPont ၏အသုံးများသောထုတ်ကုန်သည် PET စာရွက်အဖြစ်ရည်ညွန်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပြီးလျှပ်စစ်ခုခံအားကောင်းသောပစ္စည်းများဖြစ်သည့် Mylar ဇာတ်ကားများဖြစ်သည်။ ဆားကစ်ဘုတ်လုပ်ငန်းတွင်ပုံရိပ်ခြောက်ရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပွင့်လင်းသောအကာအကွယ်အလွှာနှင့် FPC မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဂဟေအထောက်အထားအဖုံးသည် PET ရုပ်ရှင်များဖြစ်ပြီးငွေရောင်ပုံနှိပ်ထားသောရုပ်ရှင်ပတ်လမ်း၏အောက်ခံအဖြစ်လည်းသုံးနိုင်သည်။ အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်၎င်းတို့ကိုကေဘယ်များ၊ Transformer များ၊ ကွိုင်များသို့မဟုတ် ICs များစွာ၏ insulating layer အဖြစ်လည်းသုံးနိုင်သည်။
၁၅။ Polyimide (PI) polyamide
၎င်းသည် bismaleimide နှင့် aromaticdiamine တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအလွန်ကောင်းသောအစေးပေါ်လီမာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပြင်သစ် “Rhone Poulenc” ကုမ္ပဏီမှစတင်ထုတ်လုပ်သောအမှုန့်ထုတ်ကုန် kerimid 601 ဟုလူသိများသည်။ DuPont က၎င်းကို Kapton ဟုခေါ်သောစာရွက်တစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤ pi ပြားသည်အလွန်ကောင်းသောအပူခုခံနိုင်စွမ်းနှင့်လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းသည် FPC နှင့် tab အတွက်အရေးပါသောကုန်ကြမ်းတစ်ခုမဟုတ်ဘဲစစ်တပ် hard board နှင့် supercomputer motherboard အတွက်အရေးပါသောပန်းကန်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဤပစ္စည်း၏ပြည်မကြီးဘာသာပြန်ချက်သည်“ polyamide” ဖြစ်သည်။
16. Reel မှ reel interlocking operation
reel (disc)၊ reel (disc) ကဲ့သို့ reel (disc) ၏ reel (ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း) ၏အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် reel လုပ်ခြင်းဖြင့် reel ပြန်ထုတ်ခြင်းနှင့် reel ပြန်ထုတ်ခြင်းတို့ကိုအဆင်ပြေစွာပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၏အချိန်နှင့်လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေရန်သူတို့၏အွန်လိုင်းအော်ပရေတာကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ။
Category Blog (676) ကုမ္ပဏီသတင်းအချက်အလက် (2) ထုတ်ကုန်များ (112) FR-4 PCB (21) HDI PCB (14) မြန်နှုန်းမြင့် PCB (5) IC အလွှာ (13) BGA (6) eMMc (1) မီနီ LED (2) SiP (1) IC စမ်းသပ်ဘုတ်အဖွဲ့ (4) မိုက်ခရိုဝေ့ PCB (29) ကြိမ်နှုန်းမြင့် PCB (26) ရော်ဂျာ PCB (18) Taconic PCB (1) Telfon PCB (5) Multi-layer PCB (18) PCB Assembly (12) တောင့်တင်းသော Flex PCB (15) အထူး PCB (11)